IAfrika inethalente – futhi uGabisile ungubufakazi | Scrolla Izindaba
IAfrika inethalente – futhi uGabisile ungubufakazi
UGabisile Shabalala, omunye wabalingisi kanye nabaculi abaphezulu, uthe ubenazo zonke izimpawu ze-Covid-19 kodwa ukhethe ukubhekana naleli gciwane elincane ngendlela yesintu.
Uthe ulandele indlela enhle yokudla, ukuphuza amanzi amthuku anolamula kanye ne-ginger, futhi waziqhelelanisa nabantu waze wasinda.
Ugogo wakhe oneminyaka engama-73 uye wahlola watholaka ene-Covid-19 futhi wangeniswa esibhedlela izinsuku eziyi-18. Ngemuva kwalokho wasinda.
Kwinhlolovo yakhe nabakwa-Scrolla.Africa, uGabisile uluvezile uhambo lwakhe olusha embonini yezokuzijabulisa.
“Njengamanje ngikhiqiza umbukiso wami obizwa nge-Around Africa noGabi ku-Instagram live. Ngikhuluma nabaculi abehlukene abavela kuzo zonke izinxenye zeAfrika futhi ngifunda ngamazwe abaphuma kuwo.
IAfrika icebile inamathalente amaningi esingawazi. Umbukiso wami uzoletha ukukhanya kwezwekazi hhayi lokhu esikubona ezinkundleni zokuxhumana lapho okukhonjiswa khona inhlupheko yeAfrika,” uyasho.
UGabisile ucule ekhwayeni yesikole kusukela emabangeni aphansi kuya kwaphezulu futhi wakhethwa njengomlingisi ohamba phambili e-state theatre ngenkathi eneminyaka eyi-19.
Umama wezingane ezimbili oneminyaka engama-30 uthe uziphilela impilo yakhe.
Waziwa kakhulu ngeqhaza alidlalayo lokuba ngumlingisi omkhulu enguPinkie Mojeki ku-SABC2 embukisweni womdlalo omfishane i-Hola Mpinji, uGabisile uthe i-Covid-19 ibiyimbi kuwo wonke umuntu ezweni, kodwa uthe yena imenze wakha ubudlelwane nomdeni wakhe. “Ngomkhankaso owenziwe nguhulumeni wokuhlala ekhaya, bengihlezi nginomndeni wami.”
UGabisile udlale indawo yomlingisi omkhulu kwibhayisikobho ebizwa nge-Losing Lerato kowezi-2019 waphinda futhi wadlala kweminye imidlalo emifishane ku-SABC1, i-Intersexions kowezi-2010 kanye ne-Fallen, kowezi-2011.
Kowezi-2013 uye waba nendima eqhubekayo emdlalweni ohlekisayo ku-SABC1 kanti ngonyaka olandelayo wathola indima yokuba ngumlingisi olekelela umlingisi omkhulu emdlalweni wamahlaya ku-Mzansi Magic obizwa nge-Kota Life Crisis.
Kowezi-2017 uGabisile ubengumlekeleli kamethuli wezinhlelo embukisweni ku-SABC1 i-#TBT, kanti kowezi-2019 wabangumethuli wezinhlelo embukisweni obizwa nge-Too Much Info (TMI) ku-Moja Love.